देश भक्ती, राष्ट्रीय भावनाले ओतप्रोत, चर्चित गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत, "मेरो पनि हैनर ? यो देश !", भिडिओ मा प्रकाश सपुत , ॠसी धमला पनी [ भिडिओ] -
देश भक्ती, राष्ट्रीय भावनाले ओतप्रोत, चर्चित गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत, “मेरो पनि हैनर ? यो देश !”, भिडिओ मा प्रकाश सपुत , ॠसी धमला पनी [ भिडिओ]
Breaking News मनोरञ्जन
२०७८, ११ बैशाख शनिबार ०४:२० April 24, 2021 clickonLeaveaComment on देश भक्ती, राष्ट्रीय भावनाले ओतप्रोत, चर्चित गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत, “मेरो पनि हैनर ? यो देश !”, भिडिओ मा प्रकाश सपुत , ॠसी धमला पनी [ भिडिओ]
चर्चित गायक प्रकाश सपुतले नयाँ गीत ‘मेरो पनि हैनर ? यो देश !’ आज मात्र सार्बजनिक गरेका छन । गायक प्रकाश सपुतको स्वरमा सजिएको गीत निकै राम्रो सुनिएकोछ । गीतको शब्द र संगित दुवै प्रकाश सपुतको रहेको छ।
देश भक्ती, राष्ट्रीय भावनाले ओतप्रोत रहेको गितमा नेपालका बिभिन्न समुदायका भेष-भुषालाई चित्रण गरिएको छ। साथै यस गितको माध्यम बाट गायक प्रकाश सपुतले नेपालका पिछिडिएका मानिष हरुको दुख पिडालाई ब्यक्त गरेका छन। भिडिओमा पत्रकार ॠसी धमला लाई पनी फिचर्ड गरिएको छ।
गितको भिडिओ निकै फरक रहेको छ। सम्पुर्ण नेपालका जात-जाती समुदायलाई निकै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ।
म्युजिक भिडियोको छायांकन नबराज उप्रेती र रबिन्द्र न्युपानेले गरेका छन । निर्देशन आफै प्रकाश सपुतले गरेका छन् भने प्रबिन भट्टले सम्पादनको पाटो सम्हालेका छन् ।
गित हिजो मात्र प्रकाश सपुतको आधिकारिक युटुब च्यानल बाट सार्बजनिक गरिएको थियो। उक्त गितको भिडिओ लाई मात्र एक दिनमा २७९,७२७ जना द्रशकहरुले हेरी सकेका छन।
गित तल हेर्नुहोस
तपाईको ( शनिबार बैशाख ११) को राशीफल
आईपीएल – पञ्जावको मुम्बैइ इण्डियन्समाथि सहज जित
अनन्या पाण्डेको क्रस कार्तिक आर्यन
२०७६, २३ बैशाख सोमबार १२:२५ May 6, 2019 clickon
थप २१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कुल संक्रमित सं‌ख्या ३४४८ पुग्यो
२०७७, २५ जेष्ठ आईतवार १६:३६ June 7, 2020 clickon